Intee Been la Wadayaa? | allsanaag
Intee Been la Wadayaa?
Cali Khaliif waxa uu sheegay inuusan saxiixin wax kalla go’id ah oo lagu kalla jarayo dalka Soomaaliya, hase ahaatee, SNMta oo iyagu goosashadu ay madax martay waxeey rabbaan ineey yiraahdaan Cali Khaliif oo soo taagan ayaa goosasho saxiixay.
SNMta waxeey marar badan ka soo saareen qabuurayaasha dad u dhintay xannuuno kalla duwan, kuwo ku dhintay shil gaari, iyo dadyoow kalle oo aan aheen beesha Isaaq iyo ajnabi kuwaas oo maalin kasta lagu sheego ineey yihiin kuwii ay xasuuqday dawladdii Kacaanka.
Waayoo ah waxeey ka faa’iideeysteen meed lafo noqday oo aan hadli karin kaas oo been laga sheegay sifihii uu u dhintay, balse Calif Khaliif wuu soo taagan yahay, wuxuuna leeyahay anigu waxba ma saxiixin. Marka haddii meeydkii lafaha noqday laga been sheegay, dadkii noolaana ma waxaa la doonayaa in laga been sheego?
Kullankii ka dhacay Burco iyo Boorame waxeey ahaayeen kuwo lagu kalla saxiixday in nabad lagu wada noolaado, balse sheekadan goosashada ay la yimaadeen beesha Isaaq.
Hadaba, shaqsiga aad ku arki doontaan muuqaalka hoose waxa uu ku doodayaa in qof aan waxba saxiixin uu yiraahdo waxbuu saxiixay.
← “Puntland waa in Badhan ay ka dhigto caasimada labaad ee PL” Garaad Ciid Yaa la Iska Iibinayaa? →